लोपोन्मुख माइलो पात्रको ‘लिलामे माइलो’ | रंग खबर
लोपोन्मुख माइलो पात्रको ‘लिलामे माइलो’
रंगखबर, काठमाडौँ – २१ औँ सताब्दीको आठौँ दशकमा आइपुग्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्याका पूर्वाधारले देशलाई करिब ढाकिसकेको छ । स्वास्थ्य र जनसंख्या शिक्षाले संयुक्त परिवारलाई अहिले एकल विन्दुसम्म पुर्याएको छ । सुखद दाम्पत्य जीवनको परिभाषामा ‘दुई सन्तान ईश्वरको वरदान’ भन्ने शब्दले राम्रै स्थान ओगटेको छ ।
जेठो र कान्छोको रुपमा सन्तान बनाउँदा हाम्रो समाजबाट हामीले के गुमाएका छौँ ? पक्कै पनि माइलो सन्तान । अहिले थापागाउँस्थित ‘कुञ्ज थिएटर’मा मन्चन भैरहेको नाटक ‘लिलामे माइलो’ले समाजमा लोपोन्मुख सन्तान माइलोको कथा उठाएको छ । नाटकको सार माथि लेखिएको पङ्ती भने होइन । एक युवतीको प्रवेशसँगै जीवनमा आइपर्ने विभिद समस्याले कसरि माइलोलाई लिलाम गर्छ, त्यो बुझ्न मंसीर १४ गतेदेखि पुस ७ गतेसम्म मन्चन हुने ‘लिलामे माइलो’ हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
नाटकका कार्यकारी निर्माता राजाराम गौतम अगाडी थप्छन ‘अहिलेको माइलो जेनेरेसन अन्तिम हो । यसपछि ‘माइलो’ भन्ने शब्द लोप हुनेछ । बौद्धिकताका हिसाबमा माइलो अगाडी हुन्छ । उसले परिवारका हरेक जिम्वेवारी बहन गरेको हुन्छ । नाटकमा त्यहि माइलो सन्तानलाई मुख्य पात्र बनाएर प्रस्तुत गरेका छौँ ।’
पूर्वी पहाडी भेगको गाउँले मौलिकतालाई आधार बनाएर मन्चन भैरहेको नाटकमा प्रभाकर न्यौपानेको कथा/निर्देशन छ । नाटकका लागि १५ जनाको कलाकार टोलीलाई रिसर्चका लागि मोरङ जिल्लाको लेटाङ गाउँमा पुर्याइएको थियो । नाटकका माध्यमबाट लेटाङको रहनसहन र संस्कृतिलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
राज थापा (काउचा) नाट्य रुपान्तर गरेको ‘लिलामे माइलो’मा सलमान गुरुङ, निशा पाख्रिन, राजन भुजेल, पुष्पराज अवस्थी, विजय नेपाल, अल्बिना न्यौपाने, मनोज थापा मगर, संजिव राई, नमस्ते दिवाकर घिमिरे, विपना थापा, विरेन्द्र खाती, शिला राना खनाल, सचिन मल्ल, संगीता थापा, सुनिल तामाङ, ललित मगर, चक्र विष्ट, पारुहाङ वान्तवालगायतका कलाकार अभिनय पस्केका छन् ।
‘तितो सत्य’का कलाकार विष्णुभक्त फुयाँलको आकस्मिक निधन
काठमाडौँ प्रदर्शनमा जसु निर्देशित गुरुङ फिल्म ‘कर्म कयां’लाई तारिफ
ट्रेलर: कमेडी र पैसाको आडमै ‘जय श्री दाम’
रंगखबर, काठमाडौँ – बजारमा कमेडी फिल्मको भिड छ । प्रि-प्रोडक्सनदेखि छायाँकन, पोस्ट प्रोडक्सन, हल र..
‘जे सुकै होस्’को अपाच्य ट्रेलर
रंगखबर, काठमाडौँ – पुष २० सार्वजनिक मिति तय गर्दै फिल्म ‘जे सुकै होस’को ट्रेलर सार्वजनिक..
‘साइँली’को विहेमा दयाहाङ नाँचे फन्केर
रंगखबर, काठमाडौँ – फिल्म ‘साइँली’को ‘नाँच माया’ गीत सार्वजनिक भएको छ । विवाहको परिवेश दृश्यमा..
Congratulations: मेक्सिकोले जित्यो मिस वर्ल्डको उपाधि
रंगखबर, काठमाडौँ – मिस वर्ल्ड – २०१८ को उपाधि मेक्सिकोले जितेको छ । मेक्सिकोकी भेनिसा..
मिस वर्ल्डको उपाधि होडबाट बाहिरियो नेपाल
रंगखबर, काठमाडौँ – मिस वर्ल्ड २०१८ को उपाधि होडबाट नेपाल बाहिरिएको छ । एसिया एण्ड ओसियनको..
जाडोमा हट नम्रता, हेर्नुस ७ तस्बिरहरु
दीपक-दीपा ज्यु सम्मान दिएको हो कि, प्रसाद बाँडेको ?
'जे सुकै होस्'को अपाच्य ट्रेलर
सर्वाधिक कमाउने २० भारतीय कलाकार